Zvikamu fekitori, vatengesi - China Zvikamu Vagadziri
Vibration exciter yakasungirirwa kune mimwe michina nemidziyo yekugadzira simba rekusimudzira, chikamu chakakosha chekushandisa kwechimisheni vibration. Kunakidzwa kwekudengenyeka kunogona kuita kuti chinhu chiwane imwe fomu uye saizi yekudengenyeka, kuitira kuti iite kudedera uye bvunzo yesimba pachinhu, kana kudzora chimbo chekuyedza chekuzungunusa uye sensor.
Sieve ndiro, inozivikanwawo seplate plate, ine yakanaka yekupfeka kuramba, hupenyu hurefu hwebasa, husinga nyoro uye unopfeka kuramba. Iyo yakakodzera yekuwacha, kuongorora, kutora, kuisa pasi, kushomeka, kushambidza uye mamwe maindasitiri emagetsi.
Iyo seti yezvinogadziriswa eccentric mabhuroko akaiswa kumagumo ese eiyo rotor shaft, uye simba rinonakidza rinowanikwa nekushandisa iyo centrifugal simba inogadzirwa neiyo yekumhanyisa-kumhanya kutenderera kweiyo shaft uye eccentric block. Iyo vibration frequency renji yeiyo vibration mota yakakura, uye mechnical ruzha runogona kuderedzwa chete kana chinonakidza simba uye simba zvakaenzana mushe.
Chikamu chinoshanda cheiyo vibrator tambo-yakaita kunge hollow cylinder ine eccentric vibrator mukati. Inotyairwa nemota, inogona kuburitsa yakakwira-frequency uye micro amplitude vibration. Iyo vibration frequency inogona kusvika 12000-15000 nguva / min. ine yakanaka vibration mhedzisiro, yakapusa chimiro uye hwakareba hupenyu hwebasa. Iyo inokodzera kutetemera matanda, mbiru, madziro uye zvimwe zvinhu uye yakawanda kongiri.